Ọmụmụ ihe dị ndụ - “Potato System” magazine
Ndị ọkà mmụta sayensị si Mordovia ga-enyere aka ịkwaga n'ọrụ ugbo dijitalụ
Moscow Power Engineering Institute na-emepụta teknụzụ eletrik iji mee ka mmepụta ihe ọkụkụ dịkwuo elu
Isi Isi na-aga Mgbari Sayensị Ọmụmụ
Nkwadebe biopreparation megide ụdị ahụhụ asaa nke emere na Brazil
Ụlọ ọrụ Brazil Grupo Vittia edebanyela ọgwụ nje ụmụ ahụhụ ga-enyere ndị ọrụ ugbo aka ịchịkwa ijiji ọcha, aphids green, aphids pink, aphids owu na ...
Ndị ọkà mmụta sayensị Japan emepụtala ihe eji ewu ụlọ site na ihe mkpofu nri
Mahadum Tokyo ewepụtala teknụzụ nwere ike mee ka mkpofu nri bụrụ ciment, ka Tech Xplore kwuru. E wetara ihe eji arụ ụlọ oriri...
Kedu otu esi egbochi ebe nduku Colorado ka ọ ghara imebi ihe ubi nduku gị?
Ndị bi na Colorado nduku ebe nwere ikike dị ịtụnanya ịmalite iguzogide ụmụ ahụhụ, gụnyere ọtụtụ carbamate, organophosphates, pyrethroids, spinosyns, na ...
Na mpaghara Yaroslavl, ha malitere iji multicopter maka ịgbasa pesticides, fatịlaịza na ịgha mkpụrụ. Ụlọ ọrụ Agromir na-arụ ọrụ ugbo na-arụ ọrụ a, ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke Ministry of Agriculture na-akọ ...
Gịnị mere physiological afọ nduku mkpụrụ tubers dị mkpa?
Afọ nke anụ ahụ bụ echiche dị mkpa na mmepụta nduku. Ọ na-ekpebi mgbe buds ga-epulite na ole Ome ga-etolite na ha. Nke a bụ...
Ọrụ ugbo. Atụmanya na ọnọdụ ọhụrụ
Lyudmila Dulskaya N'oge ọrịa na-efe efe, ndị mmadụ malitere iche echiche banyere àgwà nri, mmasị na ngwaahịa organic toro. Ma ugbu a, onye zụrụ ...
E mepụtala ihe mkpuchi ọhụrụ iji chebe megide aphids, thrips na caterpillars
Ndị na-eme nchọpụta na North Carolina State University ewepụtala Plant Armor, akwa "ihe agha osisi" nke na-eme ka ụmụ ahụhụ na-agafe n'ọgba aghara ma ọ bụrụ na ...
Peeji 1 n’ime 8 1 2 ... 8 Ọzọ